ဂျာမန်သိုးထိန်း - ဖိုင်အပြည့်အစုံ | ကမ္ဘာ့ခွေးများ
El ဂျာမန်သိုးထိန်း ကလူကြိုက်အများဆုံးဝတ်ရည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဂရုစိုက်သူနှင့်အတူလေ့ကျင့်ခန်းများစွာပြုလုပ်လိုသောအလွန်မြင့်မြတ်သော၊ အသိဉာဏ်ရှိပြီးချစ်ခင်သောခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သူသည်ချစ်ခင်ဖွယ်ကောင်းသောအချိန်လေးများကိုဖြုန်းတီးကာတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ကာကွယ်ပေးမည့်ကလေးများနှင့်အလွန်ရင်းနှီးသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့ကိုနာကျင်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
သူတို့ဟာနာခံမှုရှိပြီးလေ့ကျင့်ဖို့လွယ်ကူတယ်၊ ဘာထပ်မေးမလဲ။ အတိုချုပ်ပြောရရင်သမိုင်း၊ အပြုအမူ၊ စောင့်ရှောက်မှု၊ အားလုံး ဒီခမ်းနားဖောက်အကြောင်းကို။
6.3 တစ် ဦး ချင်းစီမှဝယ်ပါ
ဒီမယုံနိုင်စရာခွေးဟာ ၁၉ ရာစုကဂျာမနီကလာတယ်။ ၀ ံပုလွေများမကြာခဏတိုက်ခိုက်လေ့ရှိသောကြောင့်ထိုအချိန်ကတိုင်းပြည်အတွင်း၌သိုးထီးအုပ်များကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ခွေးများမွေးမြူရေးအစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၁၈၉၉ တွင်ဂျာမန်သိုးထိန်း၏သူငယ်ချင်းများအသင်းကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်နှင့်ထို့နောက်မှစ။ , ဖောက်တိုးတက်အောင်တက်အဆုံးသတ်မယ်လို့သောနမူနာကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးအရာမှာဂျက်အမည်ရှိခွေးဖြစ်ပြီးဆံပင်နှင့်ဆံပင်ရှိသောဝံပုလွေအသွင်အပြင်နှင့်ခိုင်မာသောဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားဝိသေသလက္ခဏာများကိုဆက်ခံခွေးအားဖြင့်အမွေဆက်ခံခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်မျိုးပွားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ဆက်လက်၍ သူတို့အမွေဆက်ခံခြင်းမှာမလုံလောက်သော်လည်း ဆက်လက်၍ သူတို့ကိုပျောက်ကွယ်သွားစေရန်တားဆီးခဲ့သည်။ က) ဟုတ်တယ်၊ ဖောက်ခွဲခြင်း၏ဖခင်ဟုယူဆခံရသောမက်စီမိုင်လီယန်ဗွန်စတက်ဖနီနစ်သည်တိရစ္ဆာန်၏ zootechnical လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအမြဲတမ်းထိန်းသိမ်းလိုခဲ့သည်; ဆိုလိုသည်မှာသူသည်သူတို့ကိုသိုးများ၊ ခွေးများ၊ ကုမ္ပဏီများစွာမဖြစ်စေလိုခြင်းဖြစ်သည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းများပြားလာသောကမ္ဘာတွင်လူသားများစတင်နေထိုင်သောအခါပြနာပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ Von Stephanitz သည်ဖောက်ခွဲခြင်း၏ရှင်သန်မှုကိုစိုးရိမ်သောအားဖြင့်ဂျာမန်အစိုးရအားဤခွေးများကိုယူရန်သဘောတူရန်ဆွဲဆောင်ခဲ့ပြီးရဲအားအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ရပ်တည်ရန်ကြာမြင့်စွာမယူခဲ့သည့်အလုပ်တစ်ခုနှင့်အမှန်တကယ်တွင်သူတို့သည်အလွန်ကောင်းစွာပြုလုပ်ခဲ့ကြသည် ဒီနေ့သူတို့ကိုရဲခွေးတွေအဖြစ်သုံးနေတုန်းပဲ။
လက်ရှိတွင်ဂျာမန်သိုးထိန်းများသည်ခွေးများကိုချစ်မြတ်နိုးသူများထဲတွင်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။
ဂျာမန်သိုးထိန်းသည်ကြီးမားသောခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများအတွက်အလေးချိန် ၃၀ မှ ၄၀ ကီလိုဂရမ်နှင့်အမျိုးသမီးများအတွက် ၂၂ မှ ၃၂ ကီလိုဂရမ်ရှိသည်။ ညှိုးနွမ်းညှိုးနွမ်းနေသောအမြင့်၌ ၄၀ မှ ၆၅ စင်တီမီတာနှင့် ၅၅ မှ ၆၀ စင်တီမီတာကြားရှိသည်။ ၎င်းတို့တွင်ခြေထောက်ကျယ်။ အမြီးရှည်သောကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းသော၊ ပါးစပ်သည်ရှည်လျားပြီးနားများသည်ကြီးမားပြီးတြိဂံပုံသဏ္inာန်ရှိသည်။
ဆံပင်နှင့်အမျှအမြားအပွားဆုံးမှာအမြားအပွားနှငျ့အညိုဖွစျသညျ သူတို့ကလုံးဝအနက်ရောင်, အနီနှင့်အနက်ရောင်, saber ရှိသည်လည်းရှိပါတယ်။ ဆံပင်အရှည်သည်တို။ ရှည်နိုင်သည်။
သူ၏သက်တမ်းမှာ 13 နှစ်ပေါင်း။
ဤခွေးများကိုများသောအားဖြင့်အဓိကအားဖြင့်အလုပ်အတွက်အသုံးပြုကြပြီး၊ သို့သော်ထိုသို့ဆိုရမည်ဖြစ်သည် အနည်းငယ်ပိုတည်ငြိမ်သောအပြုအမူရှိပါတယ် ဖြစ်နိုင်လျှင်အညိုရောင်သားမွေးရှိပြီး၎င်းသည်လေ့ကျင့်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ထို့အပြင်သူသည်ကြီးစွာသောအဖော်နှင့်ကာကွယ်ပေးသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇတ်ကောင်နဲ့တော်တော်ဆင်တူပေမဲ့ဆံပင်ဖြူရှိတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ရှိပေမယ့်ဒီမျိုးစိတ်ကိုအသိအမှတ်မပြုပေမယ့်»ဆွစ်ဖြူသိုးထိန်း»။ ဤလှပသောမျိုးစိတ်သည်မူလကဆွစ်ဇာလန်မှဖြစ်ပြီး၊ သင်ထင်သည့်အရာနှင့်ဆန့်ကျင်။ ၎င်းသည် albino ခွေးမဟုတ်သော်လည်းအဖြူရောင်သည်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအချက်များကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒီခွေးက အလွန်မြင့်မြတ်သော, ထိုသို့အစဉ်အမြဲ ချစ်သူ သူ့ပတ်လည်ဖြစ်ပျက်သမျှ။ ဉာဏ်ကောင်းသော y မင်္ဂလာပါလည်း ပြည့်စုံသော။ သူသည်အမြဲတမ်းအလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး၎င်းသည်လူအတွက်ရောမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ပေါက်ကွဲစေတတ်သောပစ္စည်းများအတွက်ပါရှာဖွေရေးတွင်လုပ်ရန်အချစ်ဆုံးခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်လာစေသည့်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သူသည်ကလေးများနှင့်အလွန်ရင်းနှီးသည်။ သူတို့နှင့်ခွေးနှစ် ဦး စလုံးသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနေရာကိုလေးစားရန်သင်ယူရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ဂျာမန်သိုးထိန်းခွေးသည်လေ့ကျင့်ခန်းများစွာလိုအပ်သောတိရစ္ဆာန်ဖြစ်သည်။ မင်းအိမ်မှာပြproblemsနာမရှိဘဲနေနိုင်တယ်၊ နေသမျှကာလပတ်လုံးသူသည်မကြာခဏလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ပြေးဘို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်အတိုင်း။ သူနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကစားနိုင်ရန်အတွက်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆိုင်များတွင်သင်ရောင်းရန်အတွက်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည့်ဂိမ်းများဖြင့်သူနှင့်နေ့စဉ်ကစားရန်အရေးကြီးသည်။
အခြားခွေးတစ်ကောင်လိုပဲ အရည်အသွေးမြင့်မားသောအစားအစာနှင့်တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာပြုစုစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့လည်းလေ့ကျင့်ရေးအကြောင်းမေ့လို့မရဘူး။ အဲဒါအရေးကြီးတယ် သူတို့သည်လူသားများနှင့်အတူနေထိုင်သည့်ပထမဆုံး နေ့မှစ၍ သူတို့ကိုစတင်သင်ကြားပေးသည်, အခြေခံ command များကို (ထိုင်, paw, etc) သင်ကြားခြင်းနှင့်ဆွဲခြင်းမရှိဘဲ leash အပေါ်လမ်းလျှောက်။ ၎င်းသည်ခွေးကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်သည်ဟုသင်ထင်မြင်ရပြီး၊ ပြုလေလေ၊ ပြုလေလေ ပို၍ မြန်လေလေဖြစ်သည်။ ဤအတွက်၊ အပြုသဘောဆောင်သောလေ့ကျင့်မှုကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုလိုသည်၊ သူဟာသင့်ခွေးအနားမှာပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နိုင်တဲ့ခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနည်းအားဖြင့်သူ့ကိုသူ့အကြောင်းစဉ်းစားတတ်အောင်သင်ယူပါလိမ့်မယ်။
မြင့်မားစွာတောင်းဆိုထားသောဖောက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်၎င်းကိုပိုလျှံစွာမွေးမြူခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်မွေးမြူခြင်းမှဆင်းသက်လာသောပြproblemsနာများသည်ဂျာမန်သိုးထိန်းများနှင့် ပို၍ များပြားလာသည်ဟုဆိုလိုသည် တင်ပါးဆုံရိုးနှင့်တံတောင်ဆစ် dysplasia, မျက်စိပြproblemsနာများ, အစာအိမ်လိမ် o ပူးတွဲပြproblemsနာများ.
လှပသောဂျာမန်သိုးထိန်းနှင့်သင်နေလိုပါသလော။ သို့ဆိုလျှင်သင်သေချာပင်နောင်တမရပါ။ ဤအကြံပြုချက်များကိုသတိပြုပါ။
ငါတို့တွေ့ခဲ့ရသည့်အတိုင်းသိသာသောကျန်းမာရေးပြproblemsနာများရှိနိုင်သည့်မျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် kennel သည်အမှန်တကယ်လေးနက်ပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်၊ မိဘများ၏ကျန်းမာရေးအကြောင်းကိုလည်းမေးမြန်းရန်အရေးကြီးသည် ကျနော်တို့အိမ်ပြန်ချင်သောခွေးကလေး၏။ ဒီမှာသူတို့ကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့သော့တွေရှိတယ်။
မင်းလည်ပတ်တဲ့အခါ သငျသညျသန့်ရှင်းသောအဆောက်အ ဦ ကိုရှာဖွေရပေမည်.
ခွေးများ သူတို့သည်ကျန်းမာ။ တက်ကြွနေရမည်။
တာဝန်ခံတ အားလုံးမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရပေမည် မင်းမှာရှိတယ်
သင်တတ်နိုင်ရမည် ခွေးပေါက်စတွေရဲ့မိသားစုသမိုင်းကိုသိထားပါ။ သူတို့မှာရောဂါရှိရင်ရှိရင်ရှိလား။
ချိန်းချက်သောအချိန်ရောက်သောအခါ၊ သင်၏သူငယ်ချင်းအသစ်ကိုစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးနှင့်အတူပို့ပေးလိမ့်မည် (နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့် pedigree) ။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စတိုးဆိုင်တွင်သင် ၀ ယ်ရန်သင်ရွေးပါကသင်သိသင့်သည် မည်သည့်မိဘမှဆင်းသက်လာသည်ကိုသင်မသိပါ။ ဒါကြောင့်သင်ဟာကျန်းမာရေးပြproblemနာရှိတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ကိုအိမ်ပြန်ယူနိုင်ပါတယ်။ သို့တိုင်စျေးနှုန်းနိမ့်သည်။
တစ် ဦး ချင်းစီမှဝယ်ပါ
သင်အွန်လိုင်းကြော်ငြာများနှင့်အလွန်သတိထားရပေမည်ကောင်းပြီ၊ အမွေးထူသောမိတ်ဆွေကိုရှာနေသူများကိုလိမ်လည်ရန်လူများမှတင်ပြသော (များလွန်း) များများရှိသည်။ သို့ဖြစ်လျှင်အမှန်တကယ်လေးနက်သောသူတို့ကိုမည်သို့ခွဲခြားမည်နည်း။
ကြော်ငြာကိုဘာသာစကားတစ်မျိုးတည်းဖြင့်သာရေးသားရမည်။ ၎င်းသည်သိသာထင်ရှားပုံရသည်။ သို့သော်လူအများတို့သည်ဤ "စံသတ်မှတ်ချက်" ကိုပြည့်မီသည်ဟုယုံကြည်ရန်လမ်းလွဲခဲ့သည်။ ဤသူများသည်မကြာခဏသူတို့၏ဘာသာစကားဖြင့်စာသားရေးတတ်ကြောင်း၊ အွန်လိုင်းဘာသာပြန်၏အကူအညီဖြင့်၎င်းကိုဘာသာပြန်ဆိုပြီး၊ ထိုစာသားကိုကြော်ငြာတွင်ကူးယူပြီးကူးယူထားကြောင်းသင်သိသင့်သည်။ ဝက်ဘ်ဘာသာပြန်ဆိုသူများတိုးတက်လာသော်လည်းအမှားများဆက်လက်ကျူးလွန်နေကြသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်အလွန်ကိုက်ညီမှုမရှိသော (သို့မဟုတ်လုံးဝမပါ) ဟူသောစကားလုံးကိုသင်ဖတ်လျှင်သံသယဖြစ်ပါ။
ကြော်ငြာထဲမှာ ဆက်သွယ်ရန်သတင်းအချက်အလက်ကိုတွေ့မြင်ရပါမည် ထိုသူ၏အနည်းဆုံးဖုန်းနံပါတ်နှင့်ပြည်နယ်၏။
သင် ... ရမည် သူမနှင့်တွေ့ဆုံရန်ခွေးပေါက်စများကိုတွေ့နိုင်သည်ထို့ကြောင့်သူတို့ကိုကောင်းစွာဂရုစိုက်ပြီးသူတို့၏ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်းသေချာစေပါ။
ဒီလူ နှစ်လမပြည့်သေးသောခွေးများကိုသင့်အားပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ အဟောင်း
ဂျာမန်သိုးထိန်း၏စျေးနှုန်းသည်သင်ဝယ်ယူသည့်နေရာပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်လယ်ယာမြေတစ်ခုမှဖြစ်လျှင်စျေးနှုန်းမှာ ၀ န်းကျင်ဖြစ်သည် 800 ယူရို၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၎င်းသည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စတိုးဆိုင်သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကပိုင်တစ်ခုတွင်ရှိပါကယူရို ၃၀၀ မှ ၄၀၀ အထိကုန်ကျနိုင်သည်။
စင်ကြယ်သောသားဖြစ်သော်လည်း ၎င်းသည်နမူနာများကိုရှာဖွေရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးအကာအကွယ်လည်းရသည်များသောအားဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ဤအကြောင်းကြောင့်သင်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်သောတိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်အားသင်စွန့်ခွာထွက်ခွာသွားသူအားကူညီလိုပါက၊ ငါမွေးစားရန်သင့်အားတိုက်တွန်းပါသည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ခွေးမျိုးဆက်များ » ဂျာမန်သိုးထိန်း
ကျွန်တော် အခုလေးတင် ၆ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦး မွေးစားထားပြီး သူမရဲ့ မျိုးရိုးကတ်ပြားနဲ့ သီချင်းဆိုနေပါတယ်၊ ကျွန်တော်က တိုက်ခန်းမှာနေပြီး သူက ကြောင်လေးနဲ့ အရမ်းနာခံပြီး အေးအေးဆေးဆေး ဆော့ကစားတတ်ပြီး ကောင်မလေးက ဂရုတစိုက်ကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးပါ အရာရာကို အရမ်းကာကွယ်ပေးတယ်၊ (သူမကိုမွေးမပေးခင်မှာ ခွေးနှစ်ကောင်နဲ့ အတူရှိခဲ့ပြီး သူတို့က ငါ့ကိုစိတ်မ၀င်စားကြဘဲ Silo ကို ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်) ပြီးတော့ ဒီဂျာမန်သိုးထိန်းနဲ့အတူ ငါအရမ်းပျော်တယ်၊ နောက်ဆုံးတော့ ငါ့ရဲ့ချစ်လှစွာသော အကာအကွယ်အဖော်၊ မိသားစုထဲက တစ်ယောက်ကို ရှာတွေ့ခဲ့တယ် ကြိုဆိုသောလ
María sandra သို့ပြန်သွားပါ
Mary ရေညှိ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ ဒီဖောက်ကိုကြိုက်တယ် လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ ရက်ကကျွန်တော့်ဂျက်ကွယ်လွန်ခဲ့တင့်တယ်လှတဲ့နမူနာတစ်ခုပါ။ သူဟာသူသေဆုံးချိန်မှာရှိခဲ့တဲ့ ၂ လကနေ ၁၁ နှစ်အထိချစ်ခြင်းမေတ္တာအားလုံးကိုကျွန်တော်ဂရုစိုက်ပြီးတဲ့နောက်သူဟာကျွန်တော့်ကိုစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်စေခဲ့တယ်။ ငါမွေးဖွားလာတဲ့ခွေးကလေးကိုမွေးစားဖို့တိုက်တွန်းတယ်။ မင်းသေဆုံးတဲ့အခါမင်းရဲ့နှလုံးသားကိုကွဲစေပေမယ့်သူတို့ဟာအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီပါ။
Mary Moss သို့ပြန်ပြောပါ